Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: January 2009
Posted by yahutha at 4:09 PM0comments
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၈)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၈)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသော်လည်း ဂျပန် ရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများ အယောက် ၁၀၀ကျော် တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
2003年5月30日夜、ビルマ北部ザガイン管区の小さな町ディぺーイン附近の田舎道で、最大政党・国民民主連盟(ＮＬＤ)の地方遊説隊が、USDA(連邦団結発展協会)メンバーを中心とする暴徒グルプに襲われ、この大事件に因り１００人の死者が出ました。軍政府はこの暴行事件に対して捜査もしないまま、民主化の指導者や党員さん達や参加者が逮捕されました。　国民民主連盟の副議長ウーティンウー氏、総書記長ドウアウンサンスーチー氏は自宅軟禁状態で現在も釈放には至ってません。　ディペーイン日を国民民主連盟（解放地域）日本支部が執り行いました。
2009 mm tw23
Posted by yahutha at 4:07 PM0comments
ရိုဟင်ဂျာအရေး ဒေသတွင်း ဆွေးနွေးပွဲခေါ်ဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် တောင်းဆို
Rohinjar2tw23
100th Anniversary U Thant tw23
M 100 tw23
၂၀၀၉ မြန်မာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် လူထုအုံကြွမှု
Publish at Scribd or explore others: Business career letter
နအဖ အစဉ်သွေးခွဲသော်လည်း သွေးမကွဲသော ပြည်ထောင်စုသားများရဲ့ နေ့ 
62nd Union Day Invitation
Celebrating U Thant's Centennial Anniversary (VOA Burmese)
Posted by yahutha at 12:25 AM0comments
u than tw23
Posted by yahutha at 3:13 PM0comments
Posted by yahutha at 1:27 PM0comments
ကျောက်စိမ်း ဥပဒေနဲ့ ငွေကြေး ပိတ်ပင် လိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ လောက်ကောင်ကြီးများ.
Block Burmese JADE
PDF Democracy Party News Bulletin
Publish at Scribd or explore others: Other tips children
Posted by yahutha at 2:46 AM0comments
Arakan National Newspaper Jan 09
Publish at Scribd or explore others: Academic Work Fiction & Literature working philippines
People's Revolution in Burmese by 8888 Comrades
Publish at Scribd or explore others: History Education music people
Posted by yahutha at 4:06 AM0comments
Posted by yahutha at 3:48 AM0comments
Posted by yahutha at 3:44 AM0comments
Posted by yahutha at 3:39 AM0comments
မျိုးချစ် ကရင်များဧ။် မျက်ရည် (သို့) ကရင် လောက်ကောင်များဧ။် အကြောင်း တစ်ပိုင်းတစ်စ
Publish at Scribd or explore others: Research Sheet Music & Tablat music guitar
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ဦးခွန်ထွန်းဦး။ ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ့၂၀၀၉.၀၁.၂၁ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဝေးရောက်ဗမာပြည်သူပြည်သားများတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများအဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှညီအကိုမောင်နှမများနှင့်အတူ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)အဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းပါဝင်ဆုတောင်း ခဲ့ရာ လူပေါင်း ၁၂၀ ကျော်တက်ခဲ့ပါသည်။
၄၄ ဦးမြောက် အမေရိကန်သမ္မတသစ် အိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ
အမေရိကန်တွေအနေနဲ့ မိမိနဲ့အတူ နိုင်ငံတာဝန်၊ကမ္ဘာ့တာဝန်ယူရင်း ခေတ်သစ်ထဲကို ၀င်ကြပါစို့
လို့ သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား (BarackObama) က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်
နိုင်ငံ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း၊ အခက်အခဲများနဲ့ ကြာမြင့်နေတဲ့ စစ်ပွဲနှစ်ပွဲ ဆင်နွှဲနေရတဲ့အချိန်
အဲဒါတွေကျော်လွှားနိုင်ရေး အမေရိကန်တွေ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါလို့လည်း သမ္မတဖြစ်လာသူ
ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
၀ါရှင်တန်မြို့တော် အမျိုးသားရင်ပြင်မှာလူတသန်းကျော် တက်ရောက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၄၄ ဦးမြောက် သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရင်း ဘရက်ခ်
အိုဘားမားက အဲဒီလို ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အမေရိကန်နိုင်ငံ
ရဲ့ ပထမဆုံး အာဖရိကနွယ်ဖွား သမ္မတ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ လောဘရမ္မက်နဲ့ စုပေါင်းလွဲချော်မှုများကြောင့်
အကျပ်အတည်းဖြစ်ရတယ်၊ အိမ်ဖြူတော်ကိုရော ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကိုပါ ဒီမို
ကရက်တို့ လွှမ်းမိုးထားတဲ့အချိန် နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေ ဘေးဖယ်ထားကာ နိုင်ငံရဲ့
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်ဖို့၊ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ဖန်တီးဖို့ လျှင်မြန်ရဲဝံ့စွာ
လုပ်ဆောင်ကြရလိမ့်မယ်လို့လည်း သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ပြောဆိုသွားပါ
နိုင်ငံခြားဝါဒများနဲ့ ပတ်သက်လို့ အီရတ်နိုင်ငံကနေ တာဝန်ရှိစွာထွက်ခွာပြီး အာဖဂန်
နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရစေရမယ်၊ အမေရိကန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ ကြံ့ကြံ့ခိုင်မာ
အင်အားကြီးလို့ မဖြိုခွင်းနိုင်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် အကြမ်းဖက်သမားများကို အနိုင်ယူရမယ်
လို့လည်း ကတိပြု ပြောဆိုသွားပါတယ်။
Posted by yahutha at 3:29 PM0comments
21st Jan 2009 PA
Ash Ing an Bi Ya
ပင်လယ်ထဲ မောင်းထုတ်ခံရတဲ့ မြန်မာရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ထိုင်းအစိုးရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်
Posted by yahutha at 3:02 AM0comments
မန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အမေရိကန် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ် တက် ကနေဒီ (Ted Kennedy)၊ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန် လီးဝစ် (John Lweis) နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ကလောဒီ ဘလက် (Claude Black) တို့ကို လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် မာတင်လူသာကင်းရဲ့ သားသမီးတွေက ယုံကြည်ချက်အတွက် အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်သူတွေအဖြစ် လူ့အခွင့်အရေးဆု ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
DASSK's Love Story 2009-01-17
Publish at Scribd or explore others: eBooks Fiction & Literature love communication
Posted by yahutha at 3:22 AM0comments
တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရပ် သို့ မဟုတ် တပ်ပေါင်းစုတခုကို ဖွဲ့ စည်းရန် လိုအပ်
Publish at Scribd or explore others: Academic Work Business public FEDERALAVIATIONADMIN
Posted by yahutha at 3:08 AM0comments
8888 People Power Vol2No2Jan-2009
Publish at Scribd or explore others: Academic Work Humanities culture natural
အမေရိကန်အစိုးရက စစ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်နေလို့ဆိုပြီး စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့ စာရင်းမှာဖြည့်စွက်ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့ဟာ သမာအာဇီဝ လုပ်ငန်းရှင်တွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရနဲ့နီးစပ်သူ နိုင်ငံရေးသမားတချို့ကလည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဟာ ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေး အတွက် အရေးမပါဘူးလို့ ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေး ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Max Myanmar ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဒဂုံအင်တာနယ်ရှင်နယ် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးဝင်းအောင် တို့ကို စီးပွားရေးအရ အရေးယူပိတ်ဆို့သူတွေ စာရင်းမှာ ထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အခုလို ဒဏ်ခတ်အရေးယူ ခံလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦဇော်ဇော် က သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာ မသမာမှု တခုမှမရှိဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ကိုင်နေတာလို့ အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊ ကျနော် မနက်ကတောင်ပြောနေတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရပါတယ်၊ ရပါတယ်အစ်ကိုကြီးရာ၊ ဒီလောက်တော့လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်ချစ်တာ၊ ကိုယ်က သမာအာဇီဝ စီးပွားရေးလုပ်စားတာ၊ ခုချိန်ထိလည်း ကျနော်တို့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ၂,၀၀၀၊ ၃,၀၀၀ လောက်ကို ရှာကျွေးနေရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ သူတို့လုပ်တော့လည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။”
ဦးဇော်ဇော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းအောင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် မအားလပ်ဘူးလို့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူး ကပြောပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တယ်လို့ လူသိများတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များအဖွဲ့က ကိုရဲထွဋ်က ကလည်း ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းလာကြတယ်လို့ ခုလိုပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲ အတွက် ပြောမယ်ဆိုရင် ၁၉၉၆ ကနေစပြီး ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်ထဲ ၀င်လာပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်လာတာ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှု အတွက် ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိဘူးဆိုတာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တွေရော၊ ပြည်သူလူထုကရော၊ အားလုံးသိပါတယ်၊ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိသလဲ ဆိုတော့ အဆင်ပြေမယ့်လမ်းကြောင်းကို သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ ဆုတ်ယုတ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ သက်ရောက်မှုရှိတယ်လေ၊ အခု ပြည်သူလူထုဆို နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့ဘူး၊ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ့်သူ မရှိတော့ဘူး၊ အဲဒီလောက်ထိ ဖြစ်လာတယ်။”
ဒါပေမယ့် ထိုင်းအခြေစိုက် လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်ပါတီ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ ဦးဇော်မင်း ကတော့ စီပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဆိုတာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တွေကိုသာ ပိုမိုထိခိုက်စေတယ်၊ ဒီလို ပိတ်ဆို့မှုက ဒီမိုကရေစီအတွက် အကျိုးမရှိဘူး လို့ အခုလို ပြောပါတယ်။
“စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ခါမှာ စောစောကပြောတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုတော့ ထိခိုက်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တဘက်မှာကျတော့လည်း ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ထိခိုက်တာမှန်ပေမယ့် တကယ်တမ်း တိုင်းပြည်ရဲ့ သဘာဝအရင်းမြစ်တွေက အခြေပြုပြီးလုပ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးတွေမှာ ရသမျှအကျိုးမြတ်အားလုံးက စောစောကပြောတဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ အိတ်ထဲရယ်၊ နောက်သူတို့နဲ့ အတူလက်တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ လက်ထဲပဲ ရောက်ပါတယ်၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့အတွက် ဒီငွေတွေ စီးဆင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။”
စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရသူတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပမှာပါ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေကြပြီး အများအားဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဦးတေဇပိုင် ကုမ္ပဏီ နဲ့ ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း လော်စစ်ဟန် ရဲ့ချွေးမ စင်ကာပူနိုင်ငံသူ ဆစ်ဆလီအန်းပိုင် ကုမ္ပဏီ တွေကိုလည်း ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တဲ့ စာရင်းထဲ ထည့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။